अधिनायकवादको रटानको अन्तर्य| Nepal Pati
अधिनायकवादको रटानको अन्तर्य
- डा. गोबिन्दबहादुर थापा
चुनाबकै बेलादेखि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्टहरुले जिते भने नेपालमा अधिनायकबाद आउने भन्दै आएका छन् । उनको यो नारालाई उनकै पार्टीका अरु कुनै पनि नेताले अनुशरण गरेनन् तर पनि उनले यो नाराको रट लगाउन छोडेनन् । उनको नारा उनकै पार्टीका नेताहरुले त पत्याएनन् भने जनताले पत्याउने कुरै थिएन । त्यसैले नेपाली काँग्रेसले तिनै तहको चुनाबमा लज्जास्पद हार व्यहोर्नु पर्यो । तब यस सम्बन्धमा के प्रश्न उठ्दछ भने यसरी कसैले नपत्याएको नारा देवाले किन दोहोर्याई रहेका छन् ? उनको यो रटान अहिले पनि जारी छ । यसले के कुरा संकेत गर्दछ भने देउवालाई नेपाली काँग्रेस तिनै तहको चुनाव नराम्रोसङ्ग हार्दै छ भन्ने कुराको पूर्ण आभास थियो । त्यसैले उनले चुनाब अघि र पछि त्यहि नारा दोहोर्याई रहेका छन् ।
किनभने उनलाई सुरुमै थाहा थियो कि नेपाली काँग्रेसले जे गरे पनि कुनै हालतमा पनि कुनै पनि तहको चुनाब जित्नेवाला छैन । उनि र उनको पार्टीले नेपाली जनतालाई निर्बाचनको मुखसम्म आईपुग्दा हदैसम्म चिढाएको महसुश उनले गरेका थिए । त्यसैले उनले नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरिरहेका थिएनन् । उनले त पश्चिमा समुदायलार्ई सम्बोधन गरिरहेका थिए, जो उनको बिचारमा कम्युनिष्ट बिरोधि हुन सक्दथे । उनले त्यो समुदायलाई दृष्टिगत गरि नारा दिईरहेका थिए । त्यसैले उनले चुनाव अघि लगाएको नारा असत्य साबित भई आफ्नो बिश्वसशनियता धरापमा पर्ने देखेर अहिले पनि उनि अधिनायकबादकै राग अलापिरहेका छन्, जेमा पनि अधिनायकबाद नै देखिरहेका छन्, सुत्दा, उठ्दा, खाँदा, बस्दा केवल अधिनायकबाद मात्र देखिरहेका छन् ।
यो अधिनायकबादको थेगोमा उनले आफ्नो र काँग्रेसको राजनीतिक भविष्य निर्भर रहेको देखेका छन् । जन कल्याण, देशहीत र सुशासनको कुरा काँगे्रसले उठाउन सक्ने र मिल्ने बिषय नभएपछि उनले नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुरै भएन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ग्राह्य हुन सक्ने देखेर उनले अधिनायकबादको रट लगाईरहेका छन् । यसमा कसैले द्विबिधा नपाल्दा हुन्छ । यसो गर्दा उनले अर्को फाईदा के देखेका छन् भने अधिनायकबादलाई रोक्ने नाममा उनले जति बितण्डा मचाउन लगाए पनि, सरकारका हरेक पाईलामा व्यवधान खडा गरेर कामै गर्न नदिदा पनि र लोकतान्त्रिक परम्परा र मुल्य मान्यतालाई जति लत्याए पनि क्षम्य हुनेछ । यसबाट उनले अर्को फाईदा के पनि देखेका छन् भने निर्बाचनमा पराजय पछि पार्टी भित्रैबाट उनलाई जुन संकट आउन सक्दथ्यो त्यो पन्छाउन सकिन्छ । काँगे्रसका सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्तालाई सरकार बिरुद्ध लगाएर आफु सुरक्षित रहन सकिन्छ । यसमा उनलाई आंशिक सफलता पनि मिलेको छ ।
तर मुख्य रुपमा आफ्नो व्यक्तिगत र केहि मात्रामा काँग्रेसको स्वार्थ पूर्तिको निमित्त उनले जे गरिरहेका छन त्यो अन्तत्वगत्वा उनको र पार्टीको लागि आत्मघात सरह हुनेछ भन्ने कुरा उनले ख्याल गरेका छैनन् । अधिनायकबादको उनको रागलाई जनताले पत्याएनन् र चुनाबमा काँग्रेसलाई धुलिसात पारिदिए । यसरी जनताले अत्यधिक मन पराएर निर्बाचित गरेको पार्टी अहिले सत्तामा छ र उसले सुशासन र समृद्धि दिन्छु भनेर लागिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले थलिएको मुलुकले स्थिरताको राहत पाएर अब केहि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेको छ । यस्तो घडिमा देश भित्र नबिकेको अधिनायकबादको मनोगत आरोप लगाएर सरकारलाई अघि बढ्न नदिने काम काँग्रेसले जुन गरिरहेको छ, के त्यसलाई जनताले क्याबात भनिरहेका होलान ? किमार्थ भनेका छैनन् । अधिनायकबादकै कुरा गर्ने हो २०४८ सालमा काँग्रेसको सरकारले प्रतिपक्षी बिरुद्ध गरेको व्यवहार कुनै पनि कठोर तानाशाहलाई बिर्साउने खालको थियो । जतिबेला स्वयम देउवा गृहमन्त्री थिए । चुनाव अघि र पछि देउवा सरकारले गरेकोे कुशासन कुनैपनि निकृष्ट कुशासकलाई बिर्साउने खालको थियो । चुनाबमा काँग्रेस धुलिसात हुन पुग्नुमा त्यहि कुशासन मुख्य रुपमा जिम्मेवार थियो । तर अझै पनि कांग्रेसमा चेत आएको छैन र उ जनतालाई एक पछि अर्को मन नपर्ने काम गरिरहेको छ ।